10 Zvisina kujairika Zvinokwezva Munyika Yose | Save A Train
musha > Travel Europe > 10 Zvisina kujairika Zvinokwezva Munyika Yose
Rovedza Kufamba Britain, Chitima Kufamba China, Rovedza Kufamba Germany, Train Travel Holland, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba Scotland, Rovedza Kufamba Spain, Train Travel The Netherlands, Chitima Kufamba UK, Travel Europe
izvi 10 zvinokwezva zvisina kujairika pasi rese zvichakushamisa iwe. Cinderella yakaita-yakakwirira chitsitsinho chechi, zvikomo zvenhema, mabhiriji akamiswa, uye mugero unokosha muEngland – ingori mashoma eanoshamisa uye akati shamisa, zvinokwezva zvaunofanira kushanyira pasi rose.
1. Zvisina kujairika Zvinokwezva Munyika Yose: Balcony yaJuliet
Kune vashoma vanhu vasingazive kuti nyaya yeRomeo naJuliette yakaitika muVerona. Uyezve, vanhu vashoma kwazvo havana kujairana nerudo rwe balcony scene. Chimwe chezvinhu zvakasarudzika zvekushanya muVerona imhanza yaJuliet. Balcony chikamu cheimba, uko kwaigara mhuri yeCappello muzana ramakore rechi 13. zvisinei, balcony yaive nemukurumbira yaingowedzerwa mumba imomo 20fung remakore.
Pamusoro pe, balcony yave imwe yenzvimbo dzinonyanya kuzivikanwa muEurope. Nepo vharanda rakanga risina basa chairo mukumisikidzwa kwenyaya yaRomeo naJuliet, inokwezva mazana evashanyi gore negore. Murudo, kuodzwa mwoyo, varoti uye vanofarira Shakespeare, kuuya kuzosiya zvinyorwa zvavo zverudo, zvido, uye graffiti pamadziro pasi pemhanza yaJuliet.
Rimini kuVerona Nechitima
Roma kuVerona Nechitima
Florence kuenda kuVerona Nechitima
Venice kuenda kuVerona Nechitima
2. Fairy Glen, Isle yeSkye
Cone-shaped, zvikomo zvakasvibirira, akakomberedzwa nemadziva nemapopoma, Fairy Glen ndiyo imwe yenzvimbo dzisina kujairika dzekushanyira muIsle of Sky. Nepo pasina kuzivikanwa kwakabva kune rakasiyana zita, Nzvimbo yeFairy Glen ine runako rwakakosha.
Nzvimbo yakanakisa yekuona kukuru kweFairy Glen inobva kuCastle Owen. Nzvimbo iyi haisi nhare chaiyo, asi dombo rakaumbwa rakafanana nenhare iri kure. Fairy Glen idiki chaizvo; saka, zviri nani kuisanganisa pamwe nekushanya kuKilt Rock, Murume Mukuru weStorr, uye Fairy Pools.
Iyo yekutanga fluorescent art museum munyika, ari yemagetsi Ladyland kukwezva muAmsterdam mumwe 10 zvinokwezva zvisingawanzo muEurope. Kunyangwe iwe usiri fan wemamuseum, iyi fluorescent museum chiitiko chakanakira vana nevakuru. Pamusoro pekuunganidza kunoshamisa kwemaminerari efluorescent, Ladyland inopa zvinoshamisa fluorescent artwork kubva kuma1950s. Uyezve, vashanyi vanowana mukana unokosha wekutora chikamu mukugadzira yavo yega basa reunyanzvi, muchiedza chine mavara.
Uku kukwezva kunoshamisa kuri mumoyo wedunhu reJordaan muAmsterdam, uko imba yepasi yakasviba inovhenekera nemwenje ine mavara. Yakatumidzwa zita raJimmy Hendrix's album Electric Ladyland, iyi inotonhorera inokwezva ndeyese nezve psychedelic art uye 70's mimhanzi. Hapana mubvunzo, iyo Electric Ladyland Museum muAmsterdam ndeimwe yeakanakisa kukwezva munyika.
4. Iyo Bude Tunnel, Cornwell England
Inotaridzika kunge yakajairwa epurasitiki mugero muCornwall supermarket car park, iyo Bude Tunnel inoshamisa. Ichi chinokwezva chisina kujairika ndechimwe chepamusoro 10 zvinokwezva muEngland nekuda kwezviuru zvemwenje we LED unovhenekera mumulticolor.
Inowanikwa mudhorobha reBude, ari 70 m tunnel ine mashiripiti kana yakabatidzwa. Nguva yakanaka yekuuya manheru, kuitira ruzivo rwechiedza chekupedzisira. Nepo Bude Tunnel inotaridzika kujeka masikati, usiku inova chishamiso chenyika, kukwezva vashanyi vanobva kumativi ese eBritain. Pazasi mutsara, iyo Bude Tunnel inogona kuva a kunakidza kumira parwendo rwako kuEurope, uko kunoshamisa kwechokwadi tekinoroji kunovhenekera maziso nemoyo yevadiki nevakuru.
5. Zvisina kujairika Zvinokwezva Munyika Yose: Spreepark Germany
Berlin's paki yekuvaraidza akaziva nguva dziri nani, kunyanya pakukwirira kwayo mukati 1969. Spreepark yaishandiswa kukwezva 1.5 mamiriyoni evashanyi, kuchovha pairi 40 makabati 45-mita Ferris vhiri. Speerpark ndiyo yainyanya kufarirwa kukwezva muEast Germany kusvika pakubatanidzwazve mukati 1991.
Pamusoro payo, vashanyi vaigona kukwira rollercoaster inopenga, Grand Canyon mvura kukwira, uye makapu makuru anotenderera. Nepo paki yakarasikirwa nemukurumbira nekuda kwekucheka, uye kusiiwa, Spreepark yakaramba iri nzvimbo inofadza yekushanyira muBerlin. Uyezve, paki yekuvaraidza yakasiiwa yave imwe yenzvimbo dzisina kujairika muEurope, inowanikwa uye yakavhurika kune vashanyi vanoda kuziva.
Kusiri kure neShanghai, kubva kune skyscrapers uye temberi dzekare, iwe uchawana imwe runako rwekuvaka mumufananidzo wedhorobha reChirungu. Cobblestone migwagwa, chechi, medieval town square, uye chiratidzo chinokugamuchira kuThames Town.
Thames Town yaive chikamu chechirongwa chikuru chekugadzira matunhu epasi rose, asi zano racho harina kumbozadzikiswa. saka, nhasi vashanyi kuShanghai vanogona kuyemura zvimwe zve skyscrapers inoshamisa kwazvo munyika uye mira nekudzungaira uchitenderedza chidimbu chidiki cheLondon muChina.
Yakamiswa 100 mamita pamadziro emupata, Caminito del Rey ndeimwe yenzvimbo dzinoshamisa dzeSpain dzekushanyira. 2.9 km footbridge, 4.8 km nzira yekupinda, ari 7.7 km kureba Camino aimbove nzira yebasa kudhamu. zvisinei, nhasi ndiyo imwe yenzvimbo dzinonakidza dzevashanyi muMalaga.
Chimwe chezvikonzero izvo Caminito inokwezva vafambi vazhinji inzvimbo yayo. Gara pamwe neLos Gaitanes Gorge, inoshamisa canyon ye limestone uye dolomite. saka, pasinei nemabhiriji akamanikana uye akarembera, iyo isingawanzo kukwezva Caminito del Rey ndiyo imwe yenzvimbo dzinofanirwa-kuona muAndalucia, kunyanya kune vanoda adrenaline.
8. Iyo Giant Glass Slipper Church Taiwan
Yakavhurwa mukati 2016, chechi yemuchato yegirazi repamusoro pechitsitsinho inobata Guinness rekodhi yepasirese yakakura kwazvo yakakwira chitsitsinho chakaita sechimiro cheshangu.. Giant glass slipper inzvimbo yemuchato ine mukurumbira asi haina basa chairo rechitendero. zvisinei, vamwe vangati giant glass high heel inoratidzika seCinderella's shoe.
Chechi yakakwirira-heel muTaiwan ndiyo 17.76 mamita pakureba uye inoumbwa neanopfuura 300 girazi rebhuruu, zvichisiya zvinokatyamadza kune vanoiona. Ichi chinokwezva chisina kujairika chiri muOcean View Park mutaundishipi yeBudai muTaiwan.
9. Zvisina kujairika Zvinokwezva Munyika Yose: Hondo yeOrange Italy
Carnival yeIvrea inoitika 3 mazuva pamberi peFat Chipiri. Iri zororo rakasiyana nemamwe rinounza vanhu kune yakakosha “hondo” migwagwa muIvrea, vachikandirana maranjisi. Pasinei nekunzwika sechikafu chinonakidza kurwa, Hondo yeOrenji inogona kuita zvechisimba, uye vazhinji vatori vechikamu vanosiya vakuvadzwa uye vakuvadzwa.
Kukwezva kwechisimba kwakagadzirwa nekuda kwechimwe chiitiko chechisimba. Zvinonzi pane imwe nguva mukadzi wechidiki akadimburwa musoro nehuipi marquise. Kunyange zvisiri pachena kana paine chokwadi chenyaya iyi, zvisinei mazana avanhu anopinda carnival yeorenji gore negore. saka, zvichiita kuti ive imwe yezvisina kujairika zvinokwezva muItaly.
10. Yakatarisana nePasi Imba Fengjing Ancient Town
Uku kukwezva kusajairika kwakasarudzika kuona mutaundi rekare reFengjing. Guta rekare rakakurumbira muChina rinozivikanwa nemigero yaro, uye kubvira 2014 inozivikanwa nekuve imba kune iyo Upsidedown imba. Pakupinda mumba vashanyi vanogona kuwana fenicha uye zvinhu zvemumba, zvakafanana neimba yepamusoro muPoland.
Vachipinda mumba, uchawana zvese zvakatsiga, saka hazvisi zvekunze chete. Kunyange pasina chekuita mukukwezva uku, munhu haakwanise kutorwa moyo uye kunakidzwa neiyo isina kujairika dhizaini yekuvaka.
Isu tiri Save A Train uchafara kukubatsira kuronga rwendo kune idzi 10 zvinokwezva zvisina kujairika pasi rose.
Iwe unoda kumisa yedu blog positi "10 Zvisina Kujairika Zvinokwezva Munyika Yose" pane yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsn%2Funusual-attractions-worldwide%2F - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#zvinokwezva zvisina kujairika UnusualAttractions zvisina kujairika zvinokwezva pasi rose